IFOCOP waxay bixisaa shan ikhtiyaar oo tababar ah oo ku habboon sida ku xusan ujeeddadaada, xaaladdaada, xaaladdaada shakhsiyeed, laakiin sidoo kale maalgelinta aad heli karto. Diirada saar maanta Qaaciddada degdegga ah, koorso shahaado ah oo isugu jirta afar bilood oo koorsooyin ah iyo afar bilood oo codsi wax ku ool ah shirkad ah.
« Waxaan raadinayey koorso ka yar hal sano, oo leh qayb aragtiyeed, laakiin sidoo kale mid la taaban karo, si aan u xoojiyo xirfadahayga iyo aqoontayda. Waxaan is siiyay 100%. Nassima Bouazza, oo ah arday wax ku barta tababarka "HR Manager", ayaa si fiican u soo koobaya astaamaha iyo maalgashiga loo baahan yahay si loo bilaabo Foomka Intensive ee ay bixiso IFOCOP. Lahadlida shaqaalaha iyo shaqo doonka ah raba inaan dib u tababaro oo helo shahaado la aqoonsan yahay oo ku saabsan goobta la bartilmaameedsaday, qaaciddadan ayaa sidoo kale ku habboon shaqaale horay u soo maray khibrad la soo sheegay, laakiin aan lahayn diblooma loo baahdo ama heerka masuuliyadda. Tani waa kiiska Nassima Bouazza, oo doonayay inuu xoojiyo guulaha uu gaadhay isla markaana ansaxiyo diblooma la aqoonsan yahay si uu ugu suurtogaliyo inuu u gudbo jagada HR Manager.
Maalgashi shaqsiyadeed oo muhiim ah
Maamulaha maaraynta ee shatiga haysta 21 sano ka dib shirkad warshadeed, Karine San waxay qaadatay isla talaabadaas si ay u hesho kalsoonida iyo kalsoonida shaqaalaynta qorista
Formula Intensive: Tababar xirfadeed waqti-buuxa ah oo xirfad cusub ah July 10th, 2021Tranquillus
horeIlaalinta fiidiyowga: ma u isticmaali kartaa caddeyn ahaan?
socdaHagahayaga luqadda carabiga iyo lahjaddiisa